Wariyayaasha lagu dilay Sanadkan Soomaaliya Magacyadooda, Idaacadaha, website-yada iyo Telefishinada ay u shaqeynayeen. Soomaalinews.com 25 Oct 12, 09:23
Tom Rhdoes oo ah Madaxa gudiga ka hortaga dhibaatooyinka soo gaara suxufiyiinta ayaa sheegay in dilalka suxufiyiinta ay isugu jiraan qeybo badan, isagoo farta ku goday in dilalka ay qeyb ka yihiin, siyaasiyiin, hogaamiyeyaal iyo ganacsato sida uu yiri.
	Jan. 28: Rag hubeysan ayaa dilay Hassan Osman Abdi oo ahaa Agaasimihii Idaacada Shabelle xaafada Nasteera ee degmada Wadajir.
	Feb. 28: Rag hubeysan ayaa dilay Abukar Hassan Mohamoud oo ahaa Agaasimihii Idaacadii Somaliweyn magaalada Muqdisho.
	March 4: Ali Ahmed Abdi oo ahaa wariye ka shaqeynayay Radio Galkacyo, ayaa lagu dilay magaaladaas ee bartamaha Soomaaliya.
	April 5: Mahad Salaad Aden, oo ahaa wariye u soo waramayay Idaacada Shabelle ayaa lagu dilay magaalada Beledweyn ee Bartamaha Soomaaliya.
	May 2: Farhan Jeemis Abdulle, oo u shaqeynayay Idaacada Radio Daljir ayaa lagu dilay magaalada Galkacyo.
	May 23: Ahmed Addow Anshur oo ahaa Barnaamij soo saare Idaacada Shabelle ayaa lagu dilay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho.
	July 31: Abdi Jeylani Malaq, oo ahaa majaajiliiste iyo hal abuure ka soo shaqeeyay Idaacado kala duwan iyo Telefishin ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho.
	Aug. 12: Yusuf Ali Osman, oo ahaa wariye rug cadaa ah oo ka tirsanaa Wasaarada Warfaafinta ayaa la dilay sidoo kale wariye Mohamud Ali Yare ayaa ku geeriyooday rasaas ay is weydaarsanayeen Ciidamada dowladda agagaarka Garoonka Muqdisho Stadium.
	Sept. 20: Liban Ali Nur, oo ahaa madaxa wararka Telefishinka Qaranka, iyo Abdisatar Daher Sabriye oo ahaa wariye ka tirsan Radio Muqdisho iyo Abdirahman Yasin Ali oo ahaa agaasimaha Radio Xamar ayaa ku geeriyooday weerar is qarxin ah oo ka dhacday goob caan ah oo lagu qaxweeyo magaalada Muqdisho.
	Sept. 21: Hassan Yusuf Absuge, oo u shaqeynayay Idaacada Maanta ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho.
	Sept. 27: waxaa la helay Meydka Wariye Abdirahman Mohamed Ali oo madaxa ka go�an oo ahaa wariye qora Ciyaaraha ama Sportiga ayaa laga helay Waqooyiga Muqdisho
	Sept. 28: Ahmed Abdullahi Fanah, oo ahaa Wariye u shaqeynayay Wakaalada Wararka ee Yemen SABA ayaa lagu dilay Muqdisho.
	Oct. 23: Ahmed Saakin Farah ayaa rag hubeysan ay ku dileen magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool, halkaasoo uu ka arimiyo Maamulka Somaliland.